प्रेम र साथीमा के फरक छ ? – Lekbesi Khabar
तर, साथी र प्रेमी वा प्रेमिका एकै हुन् ? कसैसँग प्रेमिल सम्बन्ध नराखी मित्रता गाँस्न सकिदैन ?कहिले काहीँ हामी पनि यस विषयमा भ्रमित हुन्छौं । आफुले साथी ठानेका व्यक्तिसँग कतै मेरो प्रेम पो छ कि ?
केही कुराहरु यस्ता हुन्छन् जुन आफ्नो साथी र प्रेमी दुवैमा समान रुपमा महसुष गर्न सक्नुहुन्छ । तर, तपाई कति गहिराई र कति पटक त्यो कुराको महशुस गरिरहरनु भएको भन्ने कुरा सम्झनुहोस् ।त्यसैबाट थाहा लाग्छ तपाई ऊ तपाईंको साथी हो वा प्रेम गर्न थाल्नुभएको छ । त्यसैले भनिएको हो की केही समय लिएर आफ्नो भावनाको मुल्यांकन गर्नुहोस् ।
२५ श्रावण २०७६, शनिबार १७:५३ August 10, 2019
पेट्रोल बोकेको ट्याङ्कर पल्टिएर विस्फोट हुँदा ६० को मृत्यु, ७० घाइते